Hatattamaan Waan Godhamuu Qabuu | QEERROO
Dirmaan OPDO fi TPLF baatii muraasaa akka dinqitti of mul’isaa ture doksaan dhukana keessatti raawwate. “Hima dideen du’a hin didu “,akkuma jedhan warri dirmaa kana hubachuu dandeenyu amma nuuf danda’ametti uummata keenyaaf ibsuu yaalleera. An maqaa Damee Boruu jedhuun baatii Gurandalaa, 2017 ” Meeshaan Abbaa Hojjetataaf Dhimma baasa”mata duree jedhu jalatti waa’ee OPDO barreesseen jira.Maxxansaan kunis Ayyaantuu fi Sagalee Qeerroo Bilisummaa irratti bahee jira.
Garuu warra akka Abaa Duulaa Gamadaa maqaa sobaa kana of irra tolee uummata Oromoo gaaga’ama guddaa amma kana jedhamee himamuu hin dandeenye teenyee ilaaluun baayyee nama gadisiisa. Abbaan Dulaa “uummatni koo waan kabajaa dhabeef”, taaitaa koo gadiseera yaroo jedhu dabbaleewwan isa keessattuu warra biyya ala keessatt maqaa activistota Oromoon iyyaa jiran hedduu farsan . Qabsoo bilisummaa Oromoo kan bakka gahuuf deemuu OPDOn akka tahee nu fudhachiisuuf hedduu wacabaran. Abban Duulaa waan TPLF Obbo Lammaa Magrsaafaa shakkitee akka tuhatuuf tooftaan taa’itaa koo gadhiise jedhee gara OPDO akka deebi’u godhamuu isa waan amma tahaa jiru irraa hubachuun rakkisaa miti. Uummatni isaa salphatee sun wal gahii EPDRF booda waan darbeef hin jiru. Yoo dhugaa uummata isa dbaabbatee jirate maaliif aangoo isaatti deebi’uu qaba? Haala kana irra kan agarru gareen Obbo Lamaa injifatmee waan harka laatee fakkaata. Kanaafuu Abbaan Duulaa ergama isaa bakkaan gahee gara taa’itaa isaati deebi’uu qaba.